Basikety – Tournoi Pangalanes 2018 : Mitarika vonjimaika ny GNBC, faharoa ny Ascut -
AccueilVaovao SamihafaBasikety – Tournoi Pangalanes 2018 : Mitarika vonjimaika ny GNBC, faharoa ny Ascut
Basikety – Tournoi Pangalanes 2018 : Mitarika vonjimaika ny GNBC, faharoa ny Ascut
28/02/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Niditra tamin’ny andro fahatelon’ny fifanintsanana ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018. Fifaninanana tanterahina amin’izao fotoana izao ao an-tampon-tanànan’i Manakara, renivohitry ny Faritra Vatovavy Fitovinany.
Ho an’ny taranja basikety manokana, sokajy N1A lehilahy, dia saika fandresena roa avy sy faharesena iray avy no azon’ireo ekipa mpandray anjara. Raha nandresy ny Cosfa tamin’ny isa 58 noho 52 ny Ascut Atsinanana teo amin’ny andro voalohany, nitohy ny fahombiazana ka nandresy ny ekipa voafantin’i Manakara tamin’ny isa mazava, 80 noho 52, indray izy ireo teo amin’ny andro faharoa. Tsy nampoizin’izy ireo kosa indray ny teo amin’ny andro fahatelon’ny fifanintsanana, satria lavon’ny ekipan’ny zandarimariam-pirenena, GNBC Vakinankaratra, tamin’ny isa 88 noho 63 ny Ascut Atsinanana. Araka izany, dia mitana ny laharana voalohany vonjimaika amin’ny filaharana ankapobeny ny GNBC, ary arahin’ny Ascut eo amin’ny laharana faharoa.
Mety hiova arakaraka ny voka-dalaon’ny fifanintsanana kosa io filaharana io. Mifarana anio mantsy ny fifanintsanana, ka ireo ekipa efatra voalohany no hiatrika ireo lalao manasa-dalana, ny zoma 2 marsa izao. Marihina fa fifaninanana tanterahina amin’ny alina ny eo amin’ny taranja basikety amin’ity Tournoi Pangalanes 2018 ity.